Vavaka ho an'i Saint Sipra. ? Fiarovana, famatorana, fampandehanana ary hanjakazakana
Vavaka ho an'i San Cipriano. Malaza izy fa manana fahefana be any an-danitra. Ataovy ny vavaka ho an'i Md ho fiarovana, ny fanadonoana ary hanjaka dia afaka manampy antsika amin'ny toe-javatra maro eo amin'ny fiainana.
Indrindra amin'ireo tranga izay heverintsika fa tsy misy vahaolana. Manokana manam-pahaizana mba hamahana ireo olan'ny mpivady izay nanapa-kevitra ny handao ny fandriana ny iray amin'ireo antoko.
Na izany aza, ny herin'izy ireo dia afaka manampy antsika hahatsapa ho voaro na miroborobo. ny vavaka mahery indrindra izy ireo ary rehefa mametraka azy ireo ny finoana rehetra ianao fa manana ilay fahagagana dia tsy ela mila hahatongavantsika.
Ankehitriny, tsiambaratelo iray fa hitondra tombony fanampiny ho antsika amin'ny fahalalana ny Masina izay tokony hitodihana amin'ny vavaka.
Ny tsirairay avy na mihoatra ny tsy mandaitra dia miankina amin'ny tranga izay itadiavantsika fanampiana.
Amin'ity tranga ity dia mahery i San Cipriano ary afaka manampy antsika amin'ny tranga izay te hanala baraka sy hanjaka amin'ny olona na ny toe-javatra sasany.
1 Tanjon'ny vavan'i St Sipraniana
1.1 Vavaka ho an'i Saint-cypianian mba hiantso ahy
1.2 Ny vavaka amin'i Saint-cipianie mba hiarovana
1.3 Vavaka ho an'i Md cyraniana mba hamatotra sy hifehy ary hanjaka
1.4 Ho an'ny vola
2 Azoko atao ve ny miaraka ny vavaka?
Tanjon'ny vavan'i St Sipraniana
San Cipriano dia manampy ny olona amin'ny fampiharana ny zava-drehetra amin'ny fiainany.
Mandritra ity lahatsoratra ity dia hampiseho fehezanteny 4 farafaharatsiny ho an'ny tanjona samihafa izahay.
Ny vavaka dia hatao:
Ampifamatotra, amehy ary manjaka fitiavana;
Ny vola sy ny fanambinana.
Raha ny marina, ireo vavaka ireo dia hanompo ny lafiny rehetra amin'ny fiainanao, avy amin'ny vola mankany am-pitiavana.
Mba hahazoana vokatra tsara indrindra dia mila mivavaka am-pinoana sy mino hatrany ny herin'i St. Caiian ianao.
Vavaka ho an'i Saint-cypianian mba hiantso ahy
Saint-cypianian, voatahy eo amin'ireo olo-masina, miangavy anao aho.
Ataovy (...) hahatsapa fa mila ahy ianao, tsy afaka mijoro ny tsy fahaizako ary miantso ahy. Ataovy ny peratra finday ary henoko ny feon'ny (...) etsy ankilany.
Saint-cypianian, mpanampy mavitrika ô, omeo ahy izany faniriana tsotra izany, henoy ny feo malefaka amin'ny (...) Ary hahatsapa izany, mankafy azy ary miankohofa indray. San Cipriano, nandresy lahatra (...) ny hiantso ahy, na aiza na aiza misy ahy ary izao.
Ataovy miantso ahy ny telefaona satria te hihaino ahy ianao ka mihomehy na hitomany eo akaikiko.
Ry malala, San Cripriano, noho ny maha-be anao dia misaotra anao aho ary amin'ny maha-mpanompo manetry tena iray dia aparitako ny voninahitrao na aiza na aiza alehako
Ka izay ihany. Ary dia ho toy izany.
Io vavaka io dia azo atao amin'ny tranga maro, na hanaovana fampihavanana an'io olona io na hanomboka fifandraisana.
Izany dia na raha mamaritra ny orinasa iray aza dia mandaitra ity fehezanteny ity.
Zava-dehibe ny filazana ny anaran'ny olona tiantsika hiantso antsika sy ny tanjona tianay hantsoina ilay antso.
Raha mbola tsy manana an'io mazava io isika dia mety mila mieritreritra mialoha mahery be ilay vavaka ary tsara ny manao izany rehefa mazava ny zava-drehetra mba tsy hangatahana diso.
Jiro labozia na tsy hanao izany amin'ny fotoana anamboarana an'io vavaka io dia miankina amin'ilay olona, ​​izay no tsara atao dia ny maka fotoana handinihana ny vavaka.
Tsy afaka mivavaka isika rehefa misy zavatra hafa ao an-tsaina, tsy maintsy mifantoka amin'ny fangatahana isika mba hahafahana manontany izay tadiavina.
Vavaka ho an'i St. Kyprosy ho fiarovana
Virtuosísimo San Cipriano, Evekan'i Korinto, mangataka aminao aho noho ny fitiavana nasain'i Jesoa Kristy Tompontsika ho anao, afaho amin'ny fanafihan'ny fahavalo ratsy aho, aza atao tezitra amiko.
Vonjeo amin'ny fahafatesana tampoka, tafiotra, tselatra, afo, ary mpifanila trano tsy manahirana aho. Raha lavo am-ponja aho dia mampionona ahy ary ampio aho, ka avo ny lohako.
Ento aho amin'izay olona mialona sy ratsy fanahy.
Ary ny fitafianao no manarona ahy amin'ny loza rehetra mitranga eo anoloako, satria amin'ny fanelanelanana ataonao dia mangataka amim-panetren-tena ny Trinite Masina, Andriamanitra Ray, Andriamanitra Zanaka ary Andriamanitra Fanahy Masina.
Iray amin'ireo ahiahy matetika ao amin'ny olombelona na tsia mangataka fiarovana ho antsika na ho an'ny mpianakavy, San Cipriano dia Santo izay afaka manome antsika an'ity fangatahana ity.
Mpiaro mahery amin'ny tranga rehetra.
Ny vavak'i Saint-Sipaniana momba ny fiarovana dia tsy maintsy atao aloha hahafantarana ny herin'i Saint-cipianie hiarovana antsika, avy eo dia tokony hangataka amin'ny fomba voafetra araka izay azo atao ny fiarovana, tsy misy arabe maro.
Ankehitriny, amin'ny dingana farany, isaorana ny fisaorana noho ny fahagagana fiarovana ho mariky ny finoana. Amin'ity fomba ity dia fehezinay ny vavaka mahery mba hahazoana fiarovana amin'ny fotoana rehetra.
Vavaka ho an'i Md cyraniana mba hamatotra sy hifehy ary hanjaka
"Ny herinao lehibe, ry ry Saint Sopaniana lehibe, apôstônan'ireo izay manam-pitiavana, enga anie ny herinao tsy manam-paharoa hataoko amiko, izay ilaiko anio.
Ataovy amin'ny anaran'ny fitiavako ny anaranao izany ô! Ilay olo-masiko mahagaga sy ireo sahirana, dia (lazao ny anaran'izay tadiavinao) hitodika amiko, vatana sy fanahy ary tsy misy olona momba azy / tsy mihoatra ahy.
Mila ahy izy ary mahita ahy amin'ny masoko ary mitady ahy na aiza na aiza na dia fantany aza fa tsy eo izy, dia mahazo ahy izy, satria eo anilako foana ary mamihina ny tenany amin'ny fanantenako ho ao am-pandriana, eo amin'ny latabatro ary amin'ny ny nofiko
Ry apostoly mahery, mpamosavy amin'ny fahagaganao sy masina amin'ny fahamasinanao ianao, aza avela aho izao!
Mila ny fahazavanao sy ny fahazavana tsy mety maty ary ny fahazavana mahagaga, handroaka ity adala ity izay mandany ahy ny fanantenana ho azy mandrakizay mandrakizay.
Avelao izy hanatona anio mba hanomezany ahy ny fanandevozana azy amin'ny fahatsapana mahatoky sy mamy sy fanahy malala, ô! Tompo ô, henoy ny zava-drehetra ianao, aza avelanao aho amin'izao fotoana izao amin'ny fahamaizinana mahatsapa fa tsy manan-danja / na tsy misy fitiavana ary tsy misy ny hafany.
Tonga amin'ny nofinofiko sy ny zava-misy iainana aho miaraka amin'ny fampanantenako hotanterahina ary amin'ny faniriako hahatanteraka azy. Ry Saint-cypianian, henoy aho, aorian'ity vavaka ity, mandalo ny fitalahoako!
Ento at that amiko izany olona tiako izany, ento at me amiko izao satria kivy tsy misy eo anatrehako aho, azafady, olo-mahatalanjona ... mihainoa ny fivavahako, miaraka amin'ilay vadinao Justina sy vehivavy integral, izay miaraka aminao amin'ny iraka ampanaovina anao ho masina amin'izay rehetra manontany izahay ...
Ry voninahitra, henoy aho!… Amena. ”
Ny fahazoana fiantraikany triple iray amin'ny olona iray dia saika zava-mahagaga iray.
Izay no antony anaovana ny vavaka manokana traranao amin'ny fomba mahomby sy farany.
Ankehitriny dia mila mahatsapa tsara ny fikasanao ianao, mitazà olona eo anilanao ny hery na ny fanaovana azy hanao izay tadiavinay dia tsy ny tsara indrindra ho an'ny fahasalamana maharitra mpivady.
Na izany aza, mahery ny vavaka ataontsika ka mila ataontsika amin-kitsimpo isika.
Izy io dia tonga lafatra amin'ny fehezina, hamehezana ary manjakazaka Lehilahy, sakaiza na olom-pantatra. Izy io dia miasa amin'ny olona rehetra.
Ho an'ny vola
Ry Siprianina malala sy malala, resy lahatra amin'ny hatsaram-panahinao masina aho ary koa amin'ny hafanam-ponao sy fanoloran-tenanao ny rariny ary Tomponay.
Vonjeo aho amin'ny tratry ny ratsy vintana. Omeo tso-drano anao aho ary manatsara ny zava-ihasalamiko. Tsy mangataka loteria, na vola avy hatrany tsy tonga aho ao anatin'ny iray andro.
Ny asa tsara dia ampy ahazoako vola ho an'ny fianakaviako.
Oh Saint-cypianian, miaraka amin'ity fangatahana fanetren-tena ity dia manantena ny hahazoanao ny tsodrano hanova ny tanjoko sy ny ahy.
Ao anatin'ny tontolo iray izay mihamalalaka ny krizy, ny fahabetsahan'ny vola no mahatonga azy hanana izany ary manary izany amin'ny sitrapo.
Izany no antony tsy maintsy anontaniantsika vola amin'i St.
Ny fangatahana ny vola mivoaka hatrany amin'ny tanantsika dia safidy tsara ahafahana miantoka ny fahombiazana amin'ny asa aman-draharaha ataontsika rehetra.
Mivavaha ary mangataha amin'i San Cipriano momba ny fahagola sy ny asa mba hahatongavan'ny fahagagana araka izay azo atao, tadidio fa tsy ny mivavaka ihany no hanaovana fa ny hanao izay azo atao mba hahatrarana izay tadiavintsika.
Azoko atao ve ny miaraka ny vavaka?
Ny marina dia olona maro no mila fanampiana amin'ny zavatra isan-karazany eo amin'ny fiainany. Rehefa mitranga izany dia tsy maintsy mivavaka ny fehezanteny rehetra ato amin'ity lahatsoratra ity.
Azonao atao ny mivavaka rehetra, fa tsy amin'io andro io. Manoro hevitra izahay ny hialanao amin'ny andro iray fitsaharana amin'ny mivavaka tsirairay.
Zava-dehibe ny tsy hivavaka amin'ny olo-masina iray ihany amin'ny andro iray hafa, raha tsy izany dia mety tsy handray ny fangatahana izy.
Koa, mivavaha amin-java-bavaka ataon i Md.